Vaovao tsara ho an'ny rehetra - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2018-01 > Vaovao tsara ho an'ny rehetra
Nanoratra toy izao i Paoly ao amin’ny Romana: “Ry rahalahy sy anabavy malala, ny iriko amin’ny Isiraelita amin’ny foko manontolo sy ny angatahiko amin’Andriamanitra dia ny hamonjena azy.” ( Romana 10,1 Fandikan-teny Genève Vaovao).
Nisy zava-nanahirana anefa: “Fa tsy ory ny zotom-pony ho an’Andriamanitra; Afaka mijoro ho vavolombelona momba izany aho. Ny tsy ampy dia ny fahalalana marina. Tsy nahita ny fahamarinan’Andriamanitra izy ireo ary niezaka nijoro teo anatrehan’Andriamanitra tamin’ny alalan’ny fahamarinany. Raha manao izany izy ireo dia mikomy amin’ny fahamarinan’Andriamanitra fa tsy manaiky izany » (Romana 10,2-3 Fandikan-teny Genève Vaovao).
Ny Isiraelita dia fantatr'i Paoly fa te ho marina eo imason'Andriamanitra miaraka amin'ny asany (amin'ny fitandremana ny lalàna).
« Fa amin’i Kristy no ahatongavana ny tanjona, izay fototry ny lalàna, dia izay rehetra mino Azy no hamarinina. Mitovy ny lalan’ny fahamarinana ho an’ny Jiosy sy ny Jentilisa » (Romana 10,4 Fandikan-teny Genève Vaovao). Tsy afaka manatratra ny fahamarinan’Andriamanitra ianao amin’ny fanatsarana ny tenanao. Andriamanitra manome rariny anao.
Niaina ambanin'ny lalàna isika rehetra. Fony mbola zaza aho dia nipetraka araka ny lalàn-dreniko. Ny iray amin'ireo fitsipika napetrany, taorian'ny nilalao tao an-tokotany, dia ny fanalana ny kiraroko alohan'ny nidirany tao amin'ilay efitrano. Mila manadio kiraro maloto feno rano amin'ny lavarangana aho.
Jesosy dia manadio ny loto
Tsy hafa Andriamanitra. Tsy tian'izy ireo hiparitaka eran'ny tranony ny maloton'ny fahotantsika. Ny olana dia, tsy manana fomba hanadiovana ny tenantsika isika ary tsy afaka miditra raha tsy hadio isika. Andriamanitra ihany no avelany hiditra ao an-tranony izay masina, tsy misy ota ary madio. Tsy misy olona afaka hahavita izany fahadiovana amin'ny alàlan'ny tenany.
Noho izany dia tsy maintsy nivoaka avy tao an-tranony i Jesosy mba hanadio antsika. Izy irery no afaka manadio antsika. Raha sahirana miala amin'ny loto maloto ianao dia afaka manadio ny tenanao mandritry ny andro farany, tsy ho ampy hiditra ny trano. Na izany aza, raha mino ny tenin'i Jesosy ianao satria efa nanadio anao dia afaka miditra ao an-tranon'Andriamanitra ary mipetraka eo amin'ny latabany hisakafo.
Ny andininy faha-5-15 ao amin'ny Romana 10 dia milaza izao manaraka izao: Tsy azo atao ny mahalala an'Andriamanitra raha tsy nesorina ny ota. Tsy afaka manaisotra ny fahotantsika ny fahalalana an'Andriamanitra.
Tamin'izany fotoana izany ao amin'ny Romana 10,5—8, nanonona an’i Paoly 5. Mosesy 30,11:12 : “Aza manao anakampo hoe: Iza no hiakatra any an-danitra? - toy ny hoe te hampidina an’i Kristy avy any ». Lazaina fa amin’ny maha-olombelona antsika dia afaka mitady sy mahita an’Andriamanitra isika. Ny zava-misy anefa dia tonga ao amintsika Andriamanitra ary mahita antsika.
Tonga tao amintsika ny Tenin'Andriamanitra mandrakizay fa Andriamanitra sy olona, ​​Zanak'Andriamanitra, Jesosy Kristy avy amin'ny nofo aman-drà. Tsy nahita azy tany an-danitra izahay. Ao amin'ny fahalalahany an'Andriamanitra, dia nanapa-kevitra ny hidina aminay izy. Jesosy dia namonjy antsika tamin'ny fanasana ny fahalotoana sy nanokatra ny lalana hahatongavantsika ao an-tranon'Andriamanitra.
Mampivoitra ny fanontaniana izany: mino ve izay lazain'Andriamanitra? Mihevitra ve ianao fa nahita an'i Jesosy ianao ary efa nanasa ny fahalotoanao hiditra ao an-tranony? Raha tsy mino izany ianao dia ivelan'ny tranon'Andriamanitra ary tsy mahazo miditra.
Miteny ao amin’ny Romana i Paoly 10,9-13 NGÜ: «Raha manaiky an’i Jesosy ho Tompo amin’ny vavanao ianao ary mino amin’ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana Azy tamin’ny maty, dia hovonjena ianao. Fa ny olona iray dia hamarinina, raha mino amin'ny fo; voavonjy ny olona iray rehefa manambara ny “finoana” amin’ny vava. Izany no ilazan’ny Soratra Masina hoe: “Izay rehetra matoky Azy dia hovonjena amin’ny fahaverezana” (Isaia 2 Kor.8,16). Tsy misy fahasamihafana na Jiosy na tsy Jiosy: iray ihany ny Tompo, ary mizara ny fananany amin’izay rehetra miantso Azy “amin’ny vavaka” izy. “Na iza na iza miantso ny anaran’i Jehovah no hovonjena” (Joela 3,5).
Izay no zavamisy: nohavotan'Andriamanitra ny zavatra noforoniny tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Nanasa ny fahotantsika Izy ary nanadio antsika tamin'ny alàlan'ny sorona nataony nefa tsy nisy fanampiana sy fangatahana nataontsika. Raha mino an'i Jesosy isika ary miaiky fa izy no Tompo, dia efa miaina ao anatin'ity zavamisy ity isika.
Ohatra ny fanandevozana
Am 1. Tamin'ny 1863 Janoary 19, ny Filoha Abraham Lincoln dia nanao sonia ny Fanambarana Famotsorana. Nilaza io baiko mpanatanteraka io fa afaka izao ny andevo rehetra any amin'ny fanjakana rehetra mikomy amin'ny governemanta amerikana. Tsy tonga tany amin’ny andevo tany Galveston, Texas ny vaovao momba izany fahafahana izany raha tsy tamin’ny 186 Jona 5. Nandritra ny roa taona sy tapany dia tsy nahalala ny fahafahany ireo andevo ireo ary niaina ny zava-misy rehefa nilaza izany tamin'izy ireo ny miaramilan'ny tafika amerikana.
Jesosy no mpamonjy antsika
Tsy mahavonjy antsika ny fiaiken-keloka, fa Jesosy no Mpamonjy antsika. Tsy afaka manery an’Andriamanitra hanao na inona na inona ho antsika isika. Ny asa tsara ataontsika dia tsy afaka ny hahatonga antsika ho tsy misy ota. Tsy maninona izay karazana hetsika ataony. Na momba ny fankatoavana fitsipika iray - toy ny fitazonana andro iray ho masina na ny fialana amin'ny alikaola - na ny asa hoe: "Mino aho". Hoy i Paoly: “Ary koa, ny fahasoavan’Andriamanitra no namonjena anareo, ary ny finoana. Koa tsy anananao ny famonjenao; Tsia, fa fanomezana avy amin’Andriamanitra izany » (Efesiana 2,8 Fandikan-teny Genève Vaovao). Na ny finoana aza dia fanomezana avy amin’Andriamanitra!
Tsy manantena ny fibabohana Andriamanitra
Manampy amin'ny fahazoana ny fahasamihafana eo amin'ny fifanarahana iray sy ny fiaiken-keloka. Ny fifanarahana dia fifanarahana ara-dalàna izay misy fifanakalozana. Ny antoko tsirairay dia adidiny mifanakalo zavatra hafa. Raha manana fifanarahana amin'Andriamanitra isika, ny fanolorantenantsika amin'i Jesosy dia manafaka antsika hamonjy ny tenantsika. Saingy tsy afaka manery an'Andriamanitra hihetsika ho antsika isika. I fahasoavana dia i Kristy izay manapa-kevitra ny hidina amintsika.
Ao amin'ny fitsarana malalaka, misy olona manaiky fa misy ny zava-misy. Hoy ny mpanao heloka bevava iray: «Ekeko fa nangalatra ny entana aho. Nanaiky ny zava-misy teo amin'ny fiainany izy. Tahaka izany koa, ny mpanara-dia an'i Jesosy dia milaza: «Manaiky aho fa tokony ho voavonjy na i Jesosy no namonjy ahy.
Nantsoina ho amin'ny fahafahana
Ny zavatra ilain'ny mpanompo tao Texas tamin'ny taona 1865 dia tsy fifanarahana mividy ny fahalalahany. Tsy maintsy nahalala sy niaiky izy ireo fa efa afaka. Ny fahafahana anananao dia efa napetraka. Afaka namoaka azy ny filoha Lincoln ary nanala azy tamin'ny fahazoany izy. Manana zo hanafaka antsika Andriamanitra ary namonjy antsika tamin'ny fiainan'ny zanany. Ny ilain'ny andevo any Texas dia ny mandre momba ny fahafahany, mino izany ary miaina mifanaraka amin'izany. Ny mpanompo dia mila olona ho avy ary hilaza azy ireo fa afaka.
Izany no hafatra avy amin’i Paoly ao amin’ny Romana 10:14: “Ary izao dia izao: Ny Tompo ihany no mahazo miantso ny Tompo, raha mino Azy. Afaka mino azy ianao raha mandre azy. Afaka mandre azy ianao raha misy olona mitory ny hafatra avy aminy ».
Azonao sary an-tsaina ve hoe nanao ahoana ireo andevo nanapaka landihazo tamin’iny andro Jona iny, tao anatin’ny hafanana 40 degre tao Texas, ary nandre ny vaovao tsaran’ny fahafahany? Nahita ny andro mahafinaritra indrindra teo amin'ny fiainanao ianao! Amin’ny Romana 10,15 Nanonona ny tenin’i Isaia toy izao i Paoly: “Akory ny hatsaran’ny tongotr’izay mitondra ny vaovao tsara.” ( Isaia 52,7).
Inona ny anjara asantsika?
Inona no anjara asantsika amin'ny drafitry ny famonjena? Mpitondra fifaliana izahay ary mitondra ny vaovao mahafaly ny olona tsy mbola nandre ny fahalalahany. Tsy afaka mamonjy olona tokana isika. Izahay dia iraka, mpampita vaovao mahafaly ny vaovao tsara ka mitondra ny vaovao mahafaly: «Nahavita ny zavatra rehetra i Jesosy, afaka tanteraka»!
Fantatry ny Isiraelita izay nahare ny vaovao tsara. Tsy nino ny teny nentin'i Paoly izy ireo. Mino ny fanafahana amin'ny fanandevozanao ary miaina amin'ny fahafahana vaovao?
nataon'i Jonathan Stepp